I-Raw Avanafil powder yi-PDE5 inhibitor evunyiweyo yokungasebenzi (i-ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina i-erection emadodeni). I-Raw Avanafil powder isebenza ngokuthintela uhlobo oluthile lwe-phosphodiesterase ye-5 enzyme efumaneka kwizicubu ezahlukeneyo zomzimba, kodwa ngokuyintloko kwi-penus cavernosum penis, nakwi-retina. Isebenza ngokwandisa ukuphuma kwegazi kwilungu lobudenge ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Amanye amachiza afanayo yi-sildenafil, tadalafil kunye ne-vardenafil. Uncedo lwe-Raw Avanafil powder kukuba unokuqala ngokukhawuleza kwesenzo xa kuthelekiswa nezinye i-PDE5 inhibitors. Ifunwa ngokukhawuleza, ifikelela ekugxininisweni okukhulu malunga nemizuzu ye-30-45.Ngaphaya kwesibini kwisithathu sabathathi-nxaxheba babenakho ukwenza isenzo sesondo ngaphakathi kwemizuzu ye-15.
I-Avanafil isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle (i-ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina i-erection emadodeni). I-Avanafil powder ikwisigaba samayeza abizwa ngokuba yi-phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Isebenza ngokwandisa ukuphuma kwegazi kwilungu lobudenge ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Ukuhamba kwegazi okwandisiweyo kunokubangela ukubakho. I-Avanafil powder ayiphilisi ukungasebenzi okanye ukwandisa umnqweno wesondo. I-Avanafil ayikuthinteli ukukhulelwa okanye ukwanda kwezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo njengegciwane lesifo somzimba sokugonywa (i-HIV).
I-Avanafil yinto ekhethiweyo ye-phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitor esetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle okubangelwa sisifo seswekile, ukubudala bexinzelelo lwe-oxidative okanye ezinye iingxaki. I-Avanafil ithintela i-cGMP ye-phosphodiesterase yohlobo oluthile lwe-5 (PDE5) enoxanduva lokudodobala kwe-cGMP kwindawo ye-corpus cavernosum ebekwe ecaleni kwempundu. I-penile erection ngexesha lokuvuselela ngokwesondo kubangelwa kukunyuka kwegazi le penile okubangelwa kukuphumla kwemithambo ye-penile kunye ne-corpus cavernosal message egudileyo. Le mpendulo iphakathi kukukhutshwa kwe-nitric oxide (NO) kwizitishi ze-nerve kunye neeseli ze-endothelial, ezivuselela ukudalwa kwe-cGMP kwiiseli zemisipha egudileyo. I-cyclic GMP ibangela ukuphumla kwemisipha egudileyo kunye nokunyuka kokuhamba kwegazi ukungena kwi-corpus cavernosum. Inhibition yohlobo lwe-phosphodiesterase 5 (PDE5) yi-avanafil iphucula umsebenzi ngokwandisa inani le-cGMP.
UZhao C, uKim S, uYan D, et al. Ukusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokukhuseleka kwe-avanafil yokunyanga ukungasebenzi kakuhle: iziphumo zokumiliselwa ngobuninzi, ukungakhethi, ukungaboni kabini, ukulawulwa kwe-placebo. BJU Int. I-2012 Mar 27;
I-Raw Yohimbine powder sisixhasi esaziwa ngokuba namandla okunyanga ukungasebenzi kakuhle kunye noncedo lokunciphisa umzimba.Uhimbine usebenza ngokwanda…
I-Raw Flibanserin hydrochloride powder, ethengiswa phantsi kwegama le-Addyi, igama lonyango elivunywe ukuba lonyango ... ..
Amandla: 1250kg / inyanga